Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 22, 2020 12: 10 No Comments
Farshaxaniiste-u-dhashay Colombia, oo ku heesta "Yamba Nga" oo Tabu Ley ah isla markaana ku shaqeeyay istuudiyaha oo uu qoray M'bilia Bel.	Akhri wax dheeraad ah
Quruxda Mareykanka Mareykanka ah: ha jeclaan haweeneyda ugu quruxda badan adduunka, laakiin waa inaad jaceyl u qabtaa haweeneyda dunidaada ka dhigeysa mid qurux badan.
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 22, 2020 12: 00 No Comments
Waxaan jecelahay inaan ahaado haweenay Madow / Afrikaan ah, xitaa adduunkan ragga - ka dib oo dhan, ragga ma gashan karaan kabaha marka aan gashan karno surwaal. By ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 15, 2020 12: 10 No Comments
Runtii, Fannaaniinta reer Kolombiyaanka ah ee ka soo jeeda kooxda "Bazurto All Star" ayaa si qurux badan u daboolay "Etat Major", gabal gabal gabay ah oo koox caan ah oo reer Kongo ah "Musica Musica" oo shukaansi ka socota ...	Akhri wax dheeraad ah
Waxaan leenahay dhaqan iyo kala duwanaansho kale, laakiin kulligeen waxaan leenahay WAAJIBAAD; taas oo ah in la wada joogo: Togo waa wadan yar (cabbir). Uma kala qaybin karno d ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 1, 2020 12: 10 No Comments
Koofiyad iyo geesinimo Amiir Freddy Wanga: Si fiican ayaad u ogtahay, in jacaylka, ay jiraan wax ka soo kordha iyo hoos u dhac. Mararka qaar waa mid wada-noolaansho ah, mararka qaarna buugaagta 'cacophony', sida muusikada.	Akhri wax dheeraad ah
Dadka afrikaanka ah, iloobinku waa cudur ama si fudud caqli la’aan? … Sidee bay u aqbalaan koobiga asalka ah iyo sida ay isu midka yihiin… Eeg sawir A
Calaamadda suufka (midnimada): Isbahaysiga Afrika, oo horay u ahaan jiray halyeeyga maanta waa imtixaanka caalamiga ah
Feb24 09: 55